बायोडाटामा गलत जानकारी दिएर अष्ट्रेलियामा जागिर खाँदा २५ महिना जेल सजाय
सिड्नी । बढी पैसा कमाउने प्रलोभनमा परेर बायोडाटामा गलत जानकारी दिइ जागिर खाने एक महिना जेल पुगेकी छिन् । सरकारी जागिर खानको लागि आफ्नो बायोडाटामा योग्यता भन्दा बढी जानकारी लेखेको कारणले भेरोनिका हिल्डा थेरिओल्ट नामकी महिलामाथि २५ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको हो । विस्तृतमा
न्युजील्याण्डमा गएको ज्वालामुखी बिस्फोटमा अष्ट्रेलियन पर्यटकहरु परेको हुनसक्ने
अष्ट्रेलिया पढ्न जाने सोचमा हुनुहुन्छ ? यी विश्वविद्यालयहरुबारे थाहा पाइराख्नुहोस्
अष्ट्रेलियाको एक होटलमा जब श्रीमतीले बिल तिर्न मानिनन्
अष्ट्रेलियामा लागेको ‘मेगा फायर’ गस्फर्डतिर बढ्न सक्ने, धुवाले सिड्नी निसासिँदै
अष्ट्रेलियाको पीआर लिनेहरु न्युजिल्याण्ड गएर बस्दा र काम गर्दा के समस्या हुन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी परिषद् अस्ट्रेलियाको नेतृत्वमा पुनः सापकोटा
सिड्नी । अस्ट्रेलियामा अध्ययनरत विश्वभरका ६ लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरुको नेतृत्वदायी संस्थाको अध्यक्ष पदमा नेपाली विद्यार्थी विजय सापकोटा पुनः विजयी भएका छन् । काउन्सिल अफ इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट्स् (सिसा) अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी परिषद्को अध्यक्षमा नेपाली विद्यार्थी सापकोटा दोस्रो कार्यकालका लागि विजयी भएका हुन् ।
सिड्नी, अष्ट्रेलिया । जङ्गली कुकुर अष्ट्रेलियामा प्रतिदिन दशलाख सरीसृप मारिने गरेका सोमबार सार्वजनिक एक नयाँ अध्ययनले जनाएको छ ।
शाम क्याथोर्न: एक अष्ट्रेलियन मोटिभेसनल स्पिकर
शाम क्याथोर्न अष्ट्रेलियन मोटिभेसनल स्पिकर (उत्प्रेरक वक्ता), लेखक, लाइफ कोच हुन् ।
अमेरिकाको निर्णयबाट अष्ट्रेलिया निरास
सिड्नी । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्बाट अगल हुने संयुक्त राज्य अमेरिकाको घोषणाबाट अष्ट्रेलिया निरास भएको छ ।